HomeAfaan OromooKomishinii poolisii Oromiyaa komaander Tamasgeen Waagjiraa M/Murtii waliigala Oromiyaa irratti Bilbilaanin waamamee dhufe jechuun waakkatan
Komishinii poolisii Oromiyaa komaander Tamasgeen Waagjiraa M/Murtii waliigala Oromiyaa irratti Bilbilaanin waamamee dhufe jechuun waakkatan.
SQ – Bitootessa 5, 2021
Dhimma Qondaaltota ABO jaal Lammii Beenyaa fi jaal Daawwit Abdataa irratti manni murtii walii gala Oromiyaa oolmaa dhaddacha Guraandhala 26/2013 ALH, ooleen komishinii Poolisii Oromiyaatti ajaja barreesse.
Akka manni murtii walii gala Oromiyaa dhaddacha Guraandhala 26/2013 ooleen dhimma qondaaltota ABO mana hidhaatti dararamaa jiran ilaaleen galmeen Qondaaltota ABO kan beellamame miseensa poolisii komishiinii Oromiyaa kan tahan komaander Tamasgeen Waagjiraa qaamaan dhiyyaatanii bu’aa ajaja dhaddachi kun dhimma kanaan kennaa ture irratti ibsa kan kennan yoo tahu akkasumas iyyattoota qaamaan Komishiniin kan dhiyyeessu yoo tahe eeguuf yoo tahu dhiyyaatanii sababa hojii birootiif dirqama fuudhee baheef ajaja kennamee ture hunda hin hubanne , ammas bilbilaanin waamamee dhufe waan taheef dhimmicha ilaaleen deebii barbaachisu kenna, ajajni mana murtiis raawwatamuu qaba Jechuun ibsaniiru.
Bakka bu’aan Komishinii poolisii ajaja dhaddachaa fudhates Ajaja kenname komishiniin gahuu malee iyyattoota dhiyyeessunis tahe deebii qabadhee dhiyyaachuun gahee kiyya miti jedheera.
Dhaddachi sababa komaander Tamasgeen Waagjiraa beellama darbe irratti ajaja mana murtii hin raawwatiin hafaniif beellama itti aanutti ilaalamee murtiin kan itti kennamu ta’ee ajaja itti aanu kennuun manni murtii waliigala Oromiyaa beellama kenneera.
1. Komishinii Poolisii Oromiyaatti komaander Tamasgeen Waagjiraaf kan kenname Yoo tahu : komishiniin poolisii Oromiyaa iyyaattoota Lammii Beenyaa Qajeelaa fi Daawit Abdataa Hundeessaa beellama irratti qaamaan akka dhiyyeessu ajaja kan kenne yoo tahu akkasumas Ajaja dhaddachi manni murtii walii gala Oromiyaa Ammaan dura gaafa Amajji 18/05/2013 , guraandhala 21/05/2013 fi Guraandhala 27/05/2013 ooleen Komishinichaa fi itti aanaa komishinaraa Girmaa Galaan qaqqabuu isaa akka adda baasee barreeffamaan mana murtii waliigala Oromiyaaf ibsu dabalaataanis itti aanaan komishinaraa Girmaa Galaan Amajji 18/05/2013 hanga gaafa Guraandhala 5/06/2013 gidduutti sababa hojiitiin biyya alaatti imaluu isaaniif ragaa ibsu waliin barreeffamaan dhaddachaaf akka ibsu ajaja kennuun oolmaa dhaddachaa yoo xumuru bu’aa beellamaa ilaaluuf beellamni itti aanu Guraandhala 30/06/2013 ganama sa’aatii 4:00 irratti akka dhiyyeessan ajaja kennuun xumureera.
Bitootess 06, 202
Gartuu Ergamaafi maxxana PPtiin sirna ABO diiguuf dhamaatu, olola sobaa oofuudhaan ammas miseensota dhaabaa hiisisuuf kachaachalti. Nuti warra hidhaan doorsifamu, warra dantaan bitamu miti!
Kora Sabaa jedhanii PP waliin ta’uun shirri lafa jala oofaa turan, uummataan harkatti fashallaan, amma immoo hooggana ABO ittiin yakkuu barbaadu. ” Miseensotaan waan isinirra gahuuf gaafatamaan isin taha jedhanii doorsisan Jedhaniiti” dubbii micciiranii dhiyeessuf dhama’u!
Kan jedhame ifa. Walgahiif waamtanii nama hiisisaa turtan. Eeruu laattanii hoggana mana jireenyaa isaanitii guursisaa turtan. Ammas maqaa koraatin miseensa waamtanii( osoo isiniif tahee), warra isin morme hiisisuuf qophii PP waliin itti jirtan quba qabna. Sana miseensa keenya hubachiifneeti jirra. Daldala maqaa ABO fi HD-ABOtiin deemaa jiru saaxille! ” Yoo dhuftan asitti waan jarri kun isin irraan gahan hinbeekamuu of eeggadhaatu jedhame. Kun immoo gaafa Gumii sabaa jettanii waamtan, poolisiin waajira marsitanii wanti godhuuf yaaltan ni beekama. Gantuun safuu hinbeektu, sirna hinkabajju!
Beekkumsaa fi gahuumsa keessan beekna, eenyu maal eessatti akka barate wallaallee miti. Doofummaa isiniif dhoksineefi obsinee bakkeetti hinbaasna!
J/Daawud nama tokkoo miti, warra isin hiisiftanfi hogganoota isin gantan mara waliin mari’achaati hojii jaarmiyaa gaggeessaa jira. Taa’umsa Shanee Gumii gidduutti( yeroo Shaneen Gumii dalagaa irra hinjiraannetti) aangoon raawwachiisummaa kan irra jiru HD-Dhaabati.
Warra sirna beekuufi kabajuuf koreen kora qopheessitu kan seeraafi sirna hoggaa dura hundeeffamte. Osoo beekkumsi jiraatee, osoo naamusa hoggansaa xiqqoo qabaattanii waan dura tolfameen buluuf fakkeenya taatu ture. ” Ebeluun hidhaa jira, ebeluun biyyaa bahe…” Jechaa koree kana qilleensa irratti diiguf ifaajuun, shira isin ta’e jettanii hoggansaa fi miseensota koree kanaa irratti hojjachaa turtan saaxila. Sana gad-baaftanii dubbattu, ammoo deebitanii hoggana ABO jettanii of-waamtu. Safuu.
Hogganootni keenya seeraan ala ugguramanii taa’an, hanga isin hojii diigumsaa xumurtaniif akka ta’e, beekamaadha. Garuu isiniif hintaane, hinta’us! Maxxana PPn hoggana hiisftanii, jaarmiyaa dhuunfannaan inuma hintaane.